IPhone 6 iyo 6 Plus waxay soo bandhigi karaan dhibaato xaga taabashada taabashada ah | Waxaan ka socdaa mac
Taabashada wadayaasha qalabka iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus waxaa laga yaabaa inay la kulmaan cilado gaar ah oo loogu talagalay dadka isticmaala qaarkood.
Qaar ka mid ah dadka isticmaala aaladaha iPhone-ka ee ay sii daayeen Apple sanadkii 2014-ka ayaa soo sheegaya arrimo ku saabsan cilladaha shaashada taabashada. Beddelaadda shaashadda ma hagaajineyso dhibaatada. Ma waxaan wajahnaa "irrid" cusub?
1 "TouchGate" ee iPhone 6
1.1 Chip soldering ayaa sababi kara dhibaatada
1.2 'BendGate' wuxuu noqon karaa asalka qaladkan
1.3 Apple miyuu ka warqabay dhibaatadan taabashada markii la sameynayay iPhone 6s?
"TouchGate" ee iPhone 6
Dhibaatooyinka iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus ayaa la sii daayay ku dhowaad laba sano ka hor, guud ahaan ku bilow shaashad yar oo ka muuqata shaashadda dusheeda qalabka ay saameysay. Tani waa waxa qaar ka mid ah isticmaaleyaashu ay ugu gudbiyeen baraha bulshada ee taageerada bulshada Apple. Markuu waqtigu dhammaado, kooxdani waxay mararka qaarkood ka sii gudubtaa shaashadda dusheeda. Si kastaba ha noqotee, jawaabta kontaroolada taabashada ayaa kasii daraysa tartiib tartiib ah.
iFixit waxay warbixino ka soo uruurisay dukaamo dayactir oo kala duwan oo ku saabsan heerka ay ka arkeen dhibaatada ka jirta Mareykanka. Mid ka mid ah aqoon isweydaarsigan ayaa sheeganaya inuu dayactiray ku dhowaad 100 aaladaha iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus oo lahaa dhibaatadan oo kale, Aqoon isweydaarsiyo kale waxay soo sheegaan daraasiin kiisas la mid ah.
AppleInsider Wuxuu la hadlay silsilad dayactir shaashad ah oo qiyaastii sameysa XNUMX qalab dayactir asbuucii. Silsiladdani waxay xaqiijinaysaa inay u aragto dhibaatadan xakamaynta taabashada "dhowr [iPhones] usbuucii ah" oo yimaada dukaamadooda soo bandhigaya fashilaadan.
Chip soldering ayaa sababi kara dhibaatada
Qaar ka mid ah dukaamada dayactirka ee dhinac saddexaad ayaa dhibaatada dib ugu soo celiyey jajabyada u turjumaya taabashada isticmaalaha macluumaadka ay iPhone awood u leedahay inay isticmaasho. Mararka qaarkood jajabyadan darawalka ah ayaa uun fashilmaya. Laakiin xaaladaha kale ayagaa ah kala-goysyada alxanka microscopic-ka ee isku xidha qori kasta iyo Motherboard-ka ayaa burburaya, taasoo keenta in guul darrooyinku ay si tartiib tartiib ah u sii kordhaan.
'BendGate' wuxuu noqon karaa asalka qaladkan
In kasta oo sababta saxda ah ee gaarka ah ee dhibaatadan la xiriirta xakameynta taabashada ee iPhone 6 iyo 6 Plus aan weli si sax ah loo go'aamin, haddana Apple Insider waxay tilmaameen in laga yaabee in fashilaadan ay la xiriirto "bendgate" caanka ahaa ee soo baxay 2014-2015 ka dib markii la bilaabay iPhone-ka weyn.
Xusuuso taas dhibaatadan waxay ku kacday iyada oo ku saleysan daciifnimada ugu weyn ee suurtogalka ah ee 6-inch iPhone 5,5 Plus. Xaqiiqda ah in qalabkani leeyahay aag ballaadhan, oo ay weheliso khafiifnimadiisa, ayaa u suurta gelisay inay xoogaa u jilicsan tahay xaaladaha qaarkood. Taasi waa, way labanlaabmi kartaa iyadoo cadaadis gaar ah la saaro.
Waqti dheeri, dhacdooyinka foorarkan weyn ayaa mas'uul ka noqon kara xaqiiqda ah in iibiyeyaasha jajabyada mas'uulka ka ah xakamaynta taabashada shaashadda.
Si kastaba ha noqotee, dhibaatadu sidoo kale waxay saameyneysaa 6-inch iPhone 4,7 sidaa darteed weli wax lama hubo.
Apple miyuu ka warqabay dhibaatadan taabashada markii la sameynayay iPhone 6s?
Apple waxaa laga yaabaa inay ka warqabtay suurtagalnimada arrinta xakamaynta taabashada ee soo baxday markii ay naqshadeysay oo ay sii deysay moodooyinka cusub ee qoyska iPhone 6s sannadkii hore. Qalabka cusub ee la sii daayay Dayrta 2015, xakamaynta taabashada ayaa loo wareejiyay qaybta isku-xidhka bandhigga. Qeybtaan, oo ay weheliso kororka kororka qaab dhismeedka qalabka, waxay umuuqataa inay ilaalineyso kalagoysyada alxanka ee jibbaarada kantaroolayaasha taabashada.
Imaatinka IPhone 6 kahor, Chips-ka xakamaynta taabashada waxaa lagu xoojiyay gaashaan bir ah taasoo ka ilaalinaysa taleefannada duugga ah isla dhibaatada.
Haddii aad ku aragto dhibaatadan taleefankaaga iPhone 6 ama 6 Plus, xusuusnow inaad weli ku haysato damaanad maxaa yeelay Yurub oo dhan inta ugu yar ee soo saaraha dammaanad ahaan waa 2 sano sharci ahaan. Marka tag Apple. Xalka ugu macquulsan ayaa ah in iPhone-kaaga lagu badalayo mid kale. Xusuusnow in haddii aad tagto aqoon isweydaarsi dhinac saddexaad ah, in kastoo dhibaatada la xallin doono, iPhone-kaaga ayaa ka bixi doona dhammaan damaanadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » IPhone 6 iyo 6 Plus ayaa dhibaato ku noqon kara xakamaynta taabashada
Sony waxay soo bandhigaysaa adabtarada wireless-ka ah si ay ugu xirmaan DualShock 4 oo ah Mac
PDF Khabiirka 2aad ee Mac waa la cusbooneysiiyay